Momba anay | Sichuan Mingtaishun Cemented Carbide Co., Ltd.
Sichuan Mingtaishun CNC Cutting Tools Co., Ltd.Ny zanaky ny Sichuan Mingtaishun Carbide Co., Ltd., izay antsoina koa ankehitriny hoe "MTS", dia mpanome serivisy manerantany manerantany vahaolana amin'ny fanapahana karbida ho an'ny fikolokoloana, fitaovana mijanona , rafitra fanaovana lavaka sy fitaovana ho an'ny lavaka manomboka amin'ny famolavolana ka hatramin'ny fivarotana, miaraka amin'ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa.
MTS dia ISO9001: 2008 sy ISO14001 voamarina hiantohana ny fahasalamana sy ny fiarovana ary hitazomana ny serivisy ho an'ny mpanjifantsika manerantany. Izahay dia mitandrina mba hiarovana ireo mpiara-miasa, mpanjifa ary mpiara-miombon'antoka.
MTS dia manana foibe any amin'ny faritanin'i Sichuan, Sina, ary miasa foibe 1 sy orinasa 4 fanampiny ary birao fivarotana 7 manerantany. Miaraka amin'ny traikefa 10 taona eo amin'ny Carbide Research and Development. MTS izao dia manolotra teknolojia avo lenta ho an'ny mpanjifa isan-karazany ny fividianana katalaogy mahazatra ary koa ny fahaizany miavaka amin'ny famolavolana sy famokarana hikirakirana ny fepetra takian'ny milina mpanjifa tsy mahazatra, manompo firenena 60.
Rehefa misafidy ny MTS ianao dia miara-miasa amin'ireo olona izay manao zavatra mety ho an'ny tsirairay sy ho an'ny mpanjifanay. Mino izahay amin'ny fampiasana ny herin'ny fifandraisana miasa matanjaka, voafatotry ny fahatokiana azonay, mba hanomezana vahaolana farany amin'ny fanapahana vy sy traikefa miavaka momba ny fahombiazanao.
Raisina an-tanan-droa hatrany ny mpanjifa hitsidika ny orinasanay hanaovana fanadihadiana momba ny asa-asa.
♦ Fanohanana politika: Tetikasa fanohanana lehibe ny politika nasionaly, vondrona mpikambana ao amin'ny Fikambanan'ny Indostria China Tungsten. Ankafizo ny fampahalalana sy loharanon-karena voalohany, ary ny fanantenana ho amin'ny fampandrosoana.
♦ Tombony indostrialy:Fitaovana mitambatra multifunctional, fitaovana haingam-pandeha ary haingam-pandeha haingam-pandeha dia ho lasa ivon'ny fampandrosoana fitaovana. Manoloana ny fitomboan'ny isan'ireo fitaovana sarotra alefa amin'ny milina, ny indostrian'ny fitaovana dia tsy maintsy manatsara ny fitaovan'ny fitaovana, mamolavola fitaovana vaovao ary firafitry ny fitaovana mirindra kokoa. Ireo fitaovana vita amin'ny karbida vita amin'ny simenitra sy ny fampiharana fanosotra dia mihamitombo.
♦ Herin'ny orinasa: Manana orinasa 4 izahay, zana-kazo 5 ary ivontoeram-barotra 7, manarona an'i Sina manontolo.
♦ Tombony tombony:Manana mpiasa efa ho 500 izahay, ao anatin'izany ny ekipa R&D matihanina 80, ary ekipa fivarotana sy serivisy misy olona mihoatra ny 200. Mametraha fiaraha-miasa stratejika amin'ireo oniversite ambony ao Shina toa ny Oniversite Sichuan sy ny University of Electronic Science and Technology.
♦ Tombony azo amin'ny vokatra:Amin'ny fisafidianana fitaovana, ny ZK30UF dia ampiasaina mandritra ny 55 degre, ny Jinlu GU25UF dia ampiasaina mandritra ny 65 degre, ary ny Zigong YG10X dia ampiasaina ho prototype an'ny 45 degre. Ny manam-pahaizana eto an-toerana sy any ivelany dia miasa hifehezana ny lafiny rehetra amin'ny vokatra avy amin'ny orinasa manomboka amin'ny fifandimbiasana ka hatrany amin'ny sinter, mba hihazonana ny tsy fitoviana sy ny fitoniana amin'ireo bara ary hihatsara ny kalitaon'ny vokatra.
♦ Tombony amin'ny tsena:Manana rojo indostrialy tanteraka izahay, vidiny mirary, famatsiana ara-potoana ary mpampiasa dia afaka mifanatrika fifanakalozana traikefa amin'ireo mpanamboatra fitaovana hiresahana ny fisafotofotoana sy ny vahaolana atrehana amin'ny fampiasana fitaovana fanapahana. Ary ampanjifaina ireo fitaovana tsy manara-penitra isan-karazany manomboka amin'ny famokarana bara ka hatramin'ny famolavolana fitaovana arakaraka ny filan'ny mpanjifa.
♦ Tombony fitantanana: Nampiditra ISO9001 (kinova 2008) / ISO9001 (kinova 2015) / ISO14001 (kinova 2004) / ISO14001 (kinova 2015) rafitra fitantanana izahay, natambatra tamin'ny famokarana tena izy, ary nahatratra ny valiny voalohany.
♦ Tombony tombony:Manana orinasa 4 sy fitaovana famokarana matihanina 250 an-trano sy avy any ivelany izahay, izay afaka mamaly ny filan'ny famokarana avy amin'ny famatsiana akora hatramin'ny vokatra R&D hatramin'ny famokarana fitaovana. Famatsiana isan-taona ny vokatra karbida simenitra 5 tapitrisa.
♦ Tombony fitahirizana:Manana trano fanatobiana finday 10 lehibe manana tahiry 2-3 tapitrisa isan-taona. Ireo vokatra firaketana dia afaka mahafeno ny 85% -n'ny fangatahan'ny tsena, ary ny tahiry an-trano rehetra dia azo afindra ao anatin'ny 3 andro.